Su’aalaha Ku Saabsan Dhaxalka | LawHelp Minnesota
Questions About Probate (PDF)407.57 KB
Waa maxay dhaxalku?
Geeridaada ka dib, “dhaxalkaaga” waa in la maareeyaa. Dhaxalkaagu waa hantida aad leedahay iyo deynta lagugu leeyahay. Haddii hantidaada qiimaheedu yahay $75,000 waxaa muhim ah in la bilaabo qeybinta dhaxalka. $75,000 kuma jiraan hantida ma guurtada ah ama hantida qof lagu magacaabay. Hantida ma guurtada ah waa dhulka iyo dhismayaasha. Hadii hantida ma guurtada ah uu ku qoran yahay magacaaga oo aan cid kale looga dardaarmin, qeybinta dhaxalka waa muhim.
Maxkamadda dhageysata dhaxalka ayaa magacawda “qof wakiilka ah” si u maareeyo dhaxalka. Waxa aad ku magacaabi kartaa dhaxalka Qof Wakiil Kaa Ah, laakiin waa in ay weli maxkamaddu ogolaataa.
Qofka Wakiilka kaa ah waxa uu qoraa liis ku saabsan dhamaan hantidaada oo dhan iyo deynta lagugu leeyahay. Qofka Wakiilka kaa ah ayaa bixiya deymaha, oo qeybiya wax kasta oo ka soo haray dhaxalkaaga.
Haddii aad qortay dardaaran, waa in ay ku cadahay sida aad dooneyso in hantidaada loo qeybiyo. Haddii aadan qorin dardaaran, taas waxaa lagu magacaabaa “qof aan dardaaran ka tagin (intestacy” oo sharciyada u degsan gobolka ayaa lagu maamulaa. Xitaa haddii aadan ka tagin dardaaran, hantidaada waxaa la siinayaa qoyskaaga marka laga reebo haddii aadan laheyn qof ehel kuu ah. Xaaladaas marka ay dhacdo “gobolka ayaa la wareegaya.” Akhri xogta urursan ee Questions About Wills (Su’aalaha inta badan la iska weydiiyo dardaaranka).
Maxkamadda dhaxalka waxaa kale oo loo adeegsadaa marka uu muran ku dhex jiro qoyska oo ku saabsan dardaaranka ama loo baahdo amarka qaali si hantida loo qeybiyo.
Hantida Ma Guurtada Ah iyo Dhaxalka
Haddii aad tahay qofka kaliya ee leh hantida ma guurtada ah markii aad geeriyootay, qeybinta dhaxalka ayaa loo baahanayaa xitaa hantidaada kale qiimaheeda uu ka yar yahay $75,000. Qofka wakiilka kaa ah waa inuu hantida ku wareejiyaa dadka leh dhaxalkaaga. Dadka leh dhaxalka waa in ay diiwaanka ka bedelaan lahaashaha hantida.
Maxaa loola jeedaa ka maaranka “qeybinta dhaxalka”?
Si looga “maarmo qeybinta dhaxalka” waxaa loola jeedaa in dadka leh dhaxalka aysan tagin maxkamadda dhaxalka. Tani waxa ay dhacdaa tusaale ahaan, haddii aad xisaab bangi aad kula qoran tahay qof kale, ama aad si wadajir ah u leedihiin dhulka. Marka aad geeriyooto, qofkaas isaga ayaa si toos ah u leh xisaabta ama dhulka. Looma baahna amar maxkamadeed, waana laga maarmaa qeybinta dhaxalka ee maxkamadda. Xaaladaha qaarkood, hadiyaha la bixiyo geerida ka hor, ama ceymiska nolosha waa hab looga maarmo qeybinta dhaxalka. Sidoo kale, hantida oo aad qof ku magacoowdo inuu dhaxlo waxa ay u sabab noqotaa in hantidaas qofku si toos u qaato, loomana baahna in maxkamaddu qeybiso dhaxalka.
Sidoo kale dhaxalka waa lagu dari karaa hantida ma guurtada ah. Hab looga maarmo maxkamadaha dhaxalka waa iyada oo la saxiixo lagana diiwaan geliyo Wareejinta Hantida Geerida Ka Dib (TODD) geerida ka hor. TODD waxa ay siineysaa mulkiyad lahaashaha geeridaada ka dib iyada oo aan loo baahan maxkamadda dhaxalka. Akhri xogta urursan ee ku saabsan Transfer on Death Deeds. (Wareejinta Hantida Geerida Ka Dib).
Ma aha sida ugu wanaagsan ee looga maarmo maxkamadda dhaxalka. Maxkamadaha dhaxalka laguma bixiyo wax lacag ah mana qaataan muddo dheer haddii aysan aheyn hanti fara badan iyo arrimo adag, ama dadka dhaxalka leh aanay isku qabqabsan. Mararka qaarkood maxkamadda oo laga dheeraado waxa ay keentaa dhibaato badan.
Dardaaran wanaagsan waxa uu ka hortagaa dagaal la isku qabsado hantida maxkamadda dhaxalka.
Maka maarmi karaa maxkamadda dhaxalka haddii uu jiro dardaaran?
Dardaaran aad qorto markasta kagama maarmi kartid maxkamadda dhaxalka. Waxa ay ku xiran tahay nooca hantida aad leedahay, imisa ayaa qiimaheedu yahay, haddii aad kaligaa mulkiyadda leedahay ama qof kale kula wadaago iyo cidda aad dooneyso in aad siiso?
Haddii ay qoysku aanay ku raacsaneyn dardaaranka, sida loo maamulay dhaxalka, waxa ay ka hor iman karaan dardaaranka ka dibna Maxkamadda Dhaxalka ayaa go’aan ka gaarta hantida. Waxaa kale oo maxkamadda loo baahanayaa haddii uusan jirin dardaaran, ama aanu qoysku isku raacsaneyn sida loo maareeyey dhaxalka.
Maxaa dhacaya haddii dhaxalku yahay mid yar?
Haddii dhaxalka qiimihiisu ka yar yahay $75,000, dadka leh dhaxalka ayaa qaadan kara hantidaada gaarka ah iyaga oo aan maxkamad tagin iyaga oo isticmaalaya “Maragkaca Ururinta Hantida Qof Ahaaneed (Affidavit for Collection of Personal Property).”
Waxa aad ka heli kartaa foomkan maxkamadda ama aad ka heli kartaa barta internetka ee www.mncourts.gov.
Guji “La Soo Bax Foomamka (Get Forms)”
Guji “Probate (Dhaxalka)”
Guji “Affidavit for Collection of Personal Property (Small Estate - No Real Estate) Maragkaca Ururinta Hantida Qof Ahaaneed”
Hantida qof ahaaneed oo ay ka mid tahay xisaabaha bangiga, deymaha, warqadaha lacagta (stocks) iyo qalabka guryaha iyo alaabada kale, laakiin aan hayen guriga aad degan tahay iyo hantida ma guurtada ah.
Wakiilkaaga shaqsiga ah ayaa gaarsiiya waxa ay helayaan kuwa dhaxalka leh, halka ay taalo, isaga oo siiya koobi ka mid ah maragkaca.
Kuwa leh dhaxalka waa in ay maragkaca, koobi la soo shaabadeeyey ee shaahaadada geerida u keenaan bangiga ama qofka hantida haya. Taas waxaa la sameyn karaa 30 cisho gudahood laga soo bilaabo taariikhda geerida.
Ma la iga doonayaa in aan magaca ilmaha ku daro mulkiyadda hantida ama xisaabta?
Arrintan si taxadar leh uga fikir. Tani waxa ay abuuri kartaa dhibaato adiga oo nool. Dhaxalku uma xuma sida ay dadku u maleynayaan. Waxa ay u maleynayaan in lacag badan kaga baxeyso oo ka badan lacagta ku baxda.
Tusaaale ahaan: Haddii aad dooneyso in aad iibiso guriga oo dhan ama aad dooneyso in aad deyn ku qaadato, waa in qofka aad ku dartay ogolaadaa. Haddii aanay ogoleyn ma iibin kartid. Waxa kale oo laga yaabaa in ay ka iibiyaan qeybta ay ku leeyihiin hantida qof kale kamana joojin kartid.
Haddii aad ku qorto magaca qof kale xisaabtaada bangiga, qofkaas kale qeyb ayuu ku yeelanayaa. Qofkaas waxa uu ku leeyahay xuquuq la mid ah tan aad ku leedahay lacagta xisaabta, wayna qaadan karaan. Sidoo kale, haddii ay tahay lacag fara badan, waxaa suurogal ah in aad canshuur ka bixiso.
La tasho qareen inta aadan qof kale ku darin magaca xisaabta ama hantida.
Isku dayga inaan ka maarmo maxkamadda dhaxalka saameyn ma ku yeelaneysaa in la i siiyo MA?
Maalin ayaa laga yaabaa in aad u baahato Ceymiska Caafimaadka gobolka (MA) si ay kaaga caawiyaan biilasha caafimaadka ama kalkaaliyaasha caafimaadka ee guriga. MA waxa ay xad u goysay dakhliga iyo hantida qofku lahaan karo. MA waxa ay leedahay sharciyo u degsan in qofku hantidiisa bixiyo si qofku u helo MA.
Marka aad codsato, waa in aad MA u sheegtaa xogta ku saabsan hantida aad bixisay, aad qofka ku aamintay ama aad ku iibisay wax ka yar qiimaha ay suuqa ka joogaan. In aad qof kale ku qorto magaciisa mulkiyadda guriga ama xisaabta bangiga waa wareejinta hantida. Waa in aad cadeysaa in wareejinta loo sameeyey sababo ka baxsan in lagu helo MA. In aad kaga maaranto maxkamadda ma aha sabab la ogol yahay. La tasho qareen aqoon u leh wareejinta hantida iyo MA ka hor inta aadan wareejin wax hanti ah.